'I-AVATAR: ABALANDELI BEAIRBENDER YOKUGQIBELA' BAFUNA UKUBUKELA 'URAYA KUNYE NENAMBA YOKUGQIBELA' - INETFLIX
Ukusuka kwimizuzu yokuqala ye URaya kunye neNamba yokugqibela, uyaziva. Eli lihlabathi elibanzi, elinzima, elenziwe ngobuchule nelifanelekile ukuba nomdla kwidiploma enothando. Kuyinto evakalayo ukuba abalandeli I-Avatar: I-Airbender yokugqibela kwaye Igosa likaKorra yazi kakuhle. Raya Ngokuqinisekileyo yenye yezinto ezimbalwa zolonwabo eziye zakwazi ukuthatha indawo yokuma kwentliziyo efanayo, ukumangaliswa, kunye nabalinganiswa abenziwe ngokumangalisayo njengoNickelodeon olandelelanayo oluncomekayo.
Ukuthelekisa Raya ukuya I-Avatar ayidluli kumvuzo omncinci, ngendlela. Yindumiso yodidi oluphezulu. Ngokwesiqhelo xa kufikwa kumabali amnandi kokubini ukwakha umhlaba okanye ukuphucula isimilo kubekwa phambili. Unendalo engenamda, etyebileyo ekufuneka abalandeli bahlale kuyo ngokungapheliyo okanye unokuba nohambo oluhle kakhulu lweqhawe. Yiyo kwimeko efanelekileyo kakhulu, ngendlela. Okwangoku I-Avatar kwaye Kanye khange udibanise nje kuphela ezi ntsika kunzima ukufikelela kuzo. Bazidibanisa ngokungagungqi njengoko bezidibanisa izinto ezigoba kwizenzo zendalo ngokwazo.
Yile ndlela ulandelelwano olwafika ngayo apha ukudala uToph, inenekazi elincinci elachitha ubomi balo likhuselekile ngumzi woBukumkani baseMhlabeni. Ukuqhawula kukaToph kunye nokunyaniseka okukhohlakeleyo kwakungeyona nje imifanekiso ebonakalayo yobuchule bakhe kunye nomhlaba oguqukayo. Babezimpawu ezilindelweyo zomntu owayenyanzelwe ukuba azibambe ubomi bakhe bonke. Kwangokunjalo, ulandelelwano luye lwathatha inkathalo yokucacisa oko kungqinelana, ukubonisa ii-Beifongs hayi njengezilo nangona kunjalo zikhusela umama notata ngokugqithileyo ekuphenduleni kwilizwe eliyingozi ngaphandle kwe-Avatar. Yindlela eyafika ngayo apha ukubumba uVarrick, indoda enobutyebi eccentric eyasungulwa njenge Kanye Incwadi yesibini yokunceda amahlaya. Njengoko ulandelelwano lwaluqhubela phambili lwaya lukhula lucaca ngakumbi ukuba uVarrick wayengaphantsi kwesidenge kwaye engaphezulu kwelogo yomntu wonke. Kweli hlabathi libonakala lidaliwe kwaye lacaciswa ngamagosa wayengumntu owangqina ukuba imicimbi elungileyo inokufezekiswa ngabangabhenisi. Kwimisitho eliqela ubuchwephesha bakhe buphazamisa ngokupheleleyo lo mgaqo wokuzama-kunye nenyani.
Abalinganiswa abakho nje kuMichael Dante DiMartino kunye noBryan Konietzko kwindalo iphela. Zintengiso yemizi yabo, imibutho yoluntu, izifundo zemali, kunye namaqela abahlobo. Ungaziva ngokwenyani ukuba kukhanya kwindawo yomzuzwana ngamnye I-Avatar kwaye Kanye, kwaye unokuyiva ngaphakathi URaya kunye neNamba yokugqibela, ngokufanelekileyo.
Ngokukhawuleza Raya , ifana kakhulu ne I-Avatar, iqala ngehlabathi elahlulwe. Kudala-dala ilizwe laseKumandra lalikade linye. Kwakungaphambi kokuba kufike i-Druun, imimoya emdaka enamandla okothusa wonke umntu. Ukugcina eli hlabathi iidragons zixubene namandla azo ukwenza i-orb enokuthi igxothe iDruun, isenzo esinexabiso kubo ngobomi babo. Elo cebo lobugorha lisebenze kwangaphambili kunokubawa kwabantu kwathatha indawo. Ngaphandle kweedragons Kumandra zahlulwe zangama-5 izizwe-i-Fang, Intliziyo, umsila, uMqolo, kunye neTalon-zonke zithathekile yi-orb kunye namandla ayo atyholwayo. Kwiminyaka engamakhulu amahlanu kamva, i-orb yachithwa, utata wakhe wajika waba ngamatye, kwaye uRaya (uKelly Marie Tran) wenza ukuba kube ngumsebenzi wakhe ukufumana inamba yokugqibela kunye nokuguqula lo mlingo mibi.
kungcono kwi-burger efileyo
Iziphumo zeli lizwe lahluliweyo zixhaphakile kakhulu kunokuba kunokwenzeka ukuba uzive bethandaza ngokusebenzisa le movie, bayikrola ibe yinto entle. INoi encinci (Thalia Tran) ngumzekelo obalaseleyo woku. Xa wayeqala ukumiliselwa kunye neqela lakhe lenkawu-efana no-Ongis, uNoi omncinci umntwana okhangayo ubonakala ngathi mncinci kunombono omnandi wokubona. Akuthathi xesha lide ukuqaphela ukuba akunjalo. UNoyi omncinci uvela eTalon, ilizwe elaziwa ngobuqhetseba nolwaphulo-mthetho. Ewe usana olulahliweyo apho luya kuthi lubhabhe kwizinto ezincinci. Kuye, ukukhohlisa abakhenkethi abakhoyo ayisiyonto yokuzonwabisa. Ngumba wobomi okanye wokufa obekwe endaweni ngokusilela kwenkqubo nenkcubeko.
Eli nqanaba lobunzulu obubandakanya konke linokubonwa eTong (uBenedict Wong), igorha lokugqibela elihlala eSpine clan. Konke oko uRaya, inenekazi elincinci elikhuselekileyo, alaziyo malunga ne-Spine kukuba lenziwe ngamagorha angoyikiyo. Inye kuphela into ecace gca malunga nale nkcazo, inye into engavumiyo ukuphendula ukuba kutheni iSpine ifuna, ifuna, okanye sinamagorha amaninzi. Olu hlobo lokudideka kulawulo lubonakala kuTong ngokwakhe. Xa eqala ukudibana noRaya noSisu (Awkwafina), intuition yakhe yokuqala kukubabopha nokubasongela. Ayinamsebenzi ukuba akukho mntu umyalelayo. Ulijoni elifundiswe ngokufanelekileyo yile ndlu inamandla, nangona kunjalo, ukhulule izimvo zakhe. Raya ke unobuganga bokubuza esi sixhobo sihleliyo, yintoni elandelayo?
Kodwa oku kudityaniswa kolwakhiwo lwehlabathi kunye nokuphuculwa kweempawu kubonakala kakuhle ngeNamaari (Gemma Chan). UNamaari une-doppelgänger kwihlabathi le I-Avatar, iNkosana uZuko ekhathazekile kwisizwe soMlilo. INkosazana yaseFang, uNamaari ime phakathi kwezona ndawo ziphakamileyo zedolophu enkulu ecacileyo. Uyakubona ukuphakama okunzima okuye kwanyanzeliswa kuye iminyaka ngenxa yendlela ebambe ngayo intloko yakhe kunye nokuchaneka kwendlela ahamba ngayo. Ngokwendalo, ilungu lasebukhosini losapho olusuka kulo mhlaba lwakhiwe kwi-elitism luza kwenza ngendlela eza kuthi ngalo lonke ixesha izuze ngelixa ishumayela ngokulunga okungcono. Yiyo kanye indlela uNamaari enza ngayo. Kodwa kuko konke ukupowusta kwakhe kukho ngamaxesha onke indlela yokungabikho koncedo kunye nexhala. UNamaari usenokuba yiNkosazana kaFang nangona kunjalo uyimveliso yemfazwe kwaye esweleka njengaye nawuphi na umntu kwindalo iphela. Uyazi ukuba ukhuseleko lobukumkani bakhe lunokuphela nangaliphi na ixesha lesibini, kwaye ukhathazeka yile nto ibangela ukuba alwe kangaka.
Oku kukuphumelela okwenzayo Raya engaqhelekanga kakhulu. Ewe, imbonakalo yomhlaba inomtsalane, kwaye uqinisekile, oopopayi abakholeleki kakhulu kufuneka ubususe ubuso bakho ngoboya bukaSisu ngalo lonke ixesha ebonakala kwisikrini. Kodwa omkhulu kunabanye lihlabathi eliziva linjalo. Ihlala ngokwaneleyo ukuba ngawo onke amaxesha uzive ucocekile kodwa ubanzi ngokwaneleyo ukukhuthaza ngokungapheliyo ubuchule bokuyila.
Ngokwenyani, ngokuqinisekileyo yenye yezona zinto zinomvuzo Raya : imibuzo evelayo. Kwenzeke ntoni kwinkosi eyiyo yomsila owafa efumba i-orb shard yakhe? Zazinjani iintsuku zakhe zokugqibela? Kwenzeka njani ukuba inkosi yangaphambili yaseTalon ikhohliswe yintombazana endala? Kwenzeka ntoni kwiintsuku eziphambili ukuya ekuweni kweSpine? U-Boun (Izaac Wang) ubaleke njani kwi-Druun xa kungekho mntu usendlwini yakhe? Unokukhetha ikakhulu nawuphi na umlinganiswa okanye inqanaba lesakhiwo kwaye ubonelele ngerekhodi yokuhlamba imibuzo enokukhuthaza elinye ibali elinomvuzo ngokunzulu.
Olu linge lokucinga lubolekisa Raya ‘Isiphene esinye esikhulu. Ngandlela thile phantse iiyure ezimbini, le filimu imfutshane kakhulu. Injalo indlela emangalisa ngayo kunye nokuntywila kwindalo iphela. Ukuba iDisney ibifanele ukuyenza ngokulandelelana ngokupheleleyo kunokubakho izinto ezoneleyo zokucoca inani lamaxesha onyaka, kwaye mhlawumbi nezinye iziporho.
Abalawuli bemovie, uDon Hall, uCarlos López Estrada, uPaul Briggs, noJohn Ripa, abanakubekwa tyala Raya 'Imibuzo emininzi engaphendulwanga. Ngokunjalo ababhali bayo, uQui Nguyen kunye noAdele Lim. URaya kunye neNjoka yokugqibela ifuna ukwenza umboniso bhanyabhanya ohambelana nenamba yokugqibela, kwaye iyayiphumeza injongo yayo ngokubabazekayo. Iminwe inqumle ukuba iNdlu yeMouse izakuva ukukhala kwethu ngoRaya noNamaari kwaye yenze utyalo-mali olongezelelekileyo kule propati kwaye bayinikeze ngokulandelelana kwayo kunye nokulandelelana kwayo ngokufanelekileyo. Xa kuziwa kwindalo iphela abayi kuphelelwa zixhobo zonikezelo.
Izigaba: Iindaba Amazon-Prime Umqala
kendra robinson yung umdlalo
ngubani ophumelele i-hoh yokugqibela kumzalwana omkhulu
Iimfazwe zeenkwenkwezi darth isibetho ngoyise ka-anakin
I-vikings ixesha le-6 isiqendu se-16 siphindaphinde
i-asian comedian evela kwi-texas